Kedu ka m ga-esi ehichapụ akaụntụ DC Online m? - Iwepụ
Isi > Iwepụ > Dcuo agaghị ewepụ - otu esi emeso
Dcuo agaghị ewepụ - otu esi emeso
Kedu ka m ga-esi ehichapụ akaụntụ DC Online m?
Google Play /Gam akporoNdebanye aha
Gaa na wallet.google.com wee banye na nke gịakaụntụ.
Na ibe 'Azụmaahịa', chọta wee pịa ndenye aha ịchọrọkagbuo.
Pịa na Nwelite ma ọ bụkagbuondenye aha gị.
PịaKagbuondenye aha bọtịnụ.
Ọ dị mma, na nkuzi a, aga m atụle otu esi ewepu mmemme ị nweghị ike iwepụ site na iji usoro ọdịnala, dịka: Dịka ọmụmaatụ, Mmemme na Akụkụ chọrọ iwepụ mmemme. Na ị na-agbalị iwepụ a usoro, ma ọ ka ada ada n'oge mwepụ. Nzọụkwụ ọzọ bụ iji ngwa iji kpochapụ onye na-ewepu ihe.
Ọ dị mma, kama ịchọta usoro ihe omume na ihichapụ faịlụ faịlụ ahụ, ọ dị mma. N'ihi na ọ bụrụ n 'ihichapụ folda faịlụ ahụ, ọ ga-abụrịrị na ị ga-ahapụ faịlụ ndị fọdụrụ na folda ndị ọzọ ị maara na ị maghị - a na-achọta ha na ha ga-abụkwa ndebanye ndebanye aha nke ị nwere ike ileghara anya. Ọ dị mma, ya mere, otu n’ime ngwa ọrụ anyị ji arụ ọrụ iji wepu mmemme isi ike bụ revo uninstaller.
Yabụ, Aga m aga n'ihu mepee Google Chrome ma aga m aga Google. Ọ bụrụ na m nwere ike n’ezie pịnye ya nke ọma. M nnọọ pịnye inrevo na mgbe ahụ uninstaller, ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ akụkụ nke ya.
Ugbu a, ị pụrụ ịhụ na ọ bụ na revouninstaller.com. N'ihi ya, m ga-aga n'ihu ma na pịa na njikọ.
Dịkwa mma ugbu a, mmemme ahụ bara uru ịzụrụ, ọ dị mma, ọ bara uru ịzụrụ, mana ọ bụrụ na ị ga-ewepụ, ị nwere ike ịma mmemme ole na ole m ga - aga - ọ nwere otu, ha na - enye ụbọchị 30 n'efu Daybọchị 30 maka ule. Nke a ga-abụrụ gị nzube. Ya mere, m pịa nbudata ahụ, bọtịnụ dị n'aka ekpe, ọ dị ugbu a iri megabytes abụọ.
bụ driverpack mma
Ma mgbe ahụ m na-aga họrọ na-emeghe ya na mgbe 'Run'. Ma ee na UAC. Họrọ dị mma maka asụsụ ntọlite.
Na-esote ma nabata nkwekọrịta ahụ, ọzọ mepụta akara ngosi desktọọpụ. Ọzọ, wee wụnye. Ọ dị mma, ebe ọ bụ na nke a bụ ebe m nyochara na onye na-ewepu ihe dị mma mgbe echichi ahụ mechara.
N'ihi ya, m pịa imecha. Na mgbe ahụ, m na-emechi ihe nchọgharị. Na na na otú ihe mbụ ị ga-ahụ bụ ndepụta nke arụnyere mmemme, ma nke a ga-abụ otu ndepụta ị yikarịrị agaghị chọrọ ịhụ na Mmemme na Akụkụ, ọma ma ọ bụrụ na ngwa ị chọrọ iji wepụ na-adịghị depụtara ebe a , ị ghaghị ịchọta ha n'ụzọ ndị ọzọ, mana ka anyị jiri nke a dịka ọmụmaatụ.
Dị ka ihe atụ, ka e were ngwa na e depụtara ebe a. Ọ bụrụ otu a, pịa pịa wee họrọ 'Uninstall'. All nri, ma ọ bụrụ na ọ na-adịghị depụtara ebe a, ị ga-amanye-iwepụ ya elu ebe a.
Mgbe ahụ dị nnọọ pịa Force Uninstall. Mgbe ahụ ị ga-achọta mmemme mmemme. Ọ dị mma, ka anyị kwuo na anyị ga-achọta folda ahụ.
Ọ dị mma, ihe m ga-eji dị ka ihe atụ nke a bụ winzip. Yabụ, ka anyị chọta ya - ọ dị na faịlụ mmemme, yana Winzip. Ọ dị mma, m ga-pịa 'Ọ dị mma' dịkwa mma nke ahụ bụ aha.
Anyị natara iwepụ iwu. Ọ dị mma, anyị ga-ahapụ ọnọdụ nyocha anyị na 'Moderate'. Na mgbe ahụ anyị na-enwe 'Run The Họrọ Wuru na-Uninstaller'.
Na na na, n'ihi ya, ọ ga-agbalị iji uninstaller na-abịa na WinZip. Ọ bụrụ na nke ahụ anaghị arụ ọrụ, faịlụ na ndekọ ndekọ ka ga-ewepụ. N'ihi ya, m na-aga na pịa 'Next'.
Na na na otú ọ ga-eme a ndekọ ndabere mbụ na mgbe ahụ, ọ ga-ike a weghachi ebe. Na ....... ma were nke abuo iji mepụta ebe weghachi.
Ọ dị mma ugbu a anyị nwere otu, nke a bụ onye na-ewepu ihe na Winzip bịara n'ezie. Ya mere, m ga-eti 'ee' ma ọ bụ mehie, nke ahụ dị mma n'ihi na Revo ka na-ewepu ngwa ngwa jọrọ njọ. Na na na otú ahụ ka anyị na-nnọọ na-aga na-eje ije site na nzọụkwụ ebe a na ọ ga-ahapụ a fọduru.
Ọ dị mma, ọ dị mma, mmemme ahụ, etinyere ya, ugbu a onye na - ewepu ihe n’eziokwu wee jiri mmemme ahụ m chọrọ iwepụ ezuola, ụfọdụ m ga - pịa ‘’ Scan ’na akuku aka nri di ala. Na anyị ga-anya n'ihi na na-elele maka remnants nke usoro ihe omume na m na-ewepụ. Na na na, na ugbu a ị nwere ike n'ezie na-ahụ na ndị a na-niile ndekọ Ndenye, ndekọ Ndenye rifọrọ Winzip.
Ọ dị mma, ihe kachasị mfe m ga-eme maka nke a bụ ịme 'họrọ ihe niile'. All nri, nke bụ ihe niile igodo - niile ndekọ Ndenye, dịkwa mma. M ga-pịa 'Next'. wee jụọ m ka m kwado, pịa 'ee'.
Na na na na-esonụ, e nwere bụ a fọdụrụ afọdụ faịlụ nchekwa, m ga-aga n'ihu na pịa ya, na mgbe ahụ, m ga-kụrụ 'n'isi' ma pịa 'Ee' ọzọ, na na na, na na ọ bụ ya. Ngwa adighi. Na na na, na na na na na na ihu ọma iwepu mmemme na-adịghị arụnyere site omenala n'aka.
Dị nnọọ eji na Revo Uninstaller dịkwa mma. Na ka dị nnọọ nso niile nke ihe ndị a. Odi mma, anyi emeela.
Olee otú m tufuo Oge ojiri gaa njehie?
Nzọụkwụ 1: Pịa na mmalite wee 'Ogwe njikwa'. Nzọụkwụ 2: Mgbe ahụ na nchịkwa nchịkwa, n'okpuru 'Mmemme', pịa 'Iwepụihe omume 'nhọrọ. Nzọụkwụ 3: Họrọ Microsoft Visual C ++ nchịkọta arụnyere na kọmputa gị naiwepụha. Kwụpụ 4: Malitegharịa ekwentị ahụ ma mee ka mgbanwe ndị ahụ nwee mmetụta.Mar 3 2021
Taa, aga m egosi gị otu esi edozi njehie oge '339': Component 'MSCOMCTL.OCX ma ọ bụ otu n'ime ndị ịdabere na ya edeghị aha ya nke ọma: faịlụ na-efu ma ọ bụ ghara ịdị irè? Biko lee isiokwu a ruo mgbe ọgwụgwụ. Njehie a na - apụta mgbe ị na - anwa ịwụnye Xbox Backup Onye Okike na mmemme ndị ọzọ chọrọ ihe Windows a
Ọ bụrụ na gị na oyiri nke Windows a na-efu a akụrụngwa, ị ga-enwe ike iji wụnye ma ọ bụ na-eji software. The ngwọta a manụ nsogbu dị nnọọ mfe. Ihe ị ga - eme bụ ibudata ma tinye faịlụ achọrọ na folda na draịva C ma ọ bụ ebe arụnyere Windows.
audio nkwalite nsogbu
Tupu anyị na-aga n'ihu, jide n'aka na ị nwere ndutịm ùgwù na-emeghe iwu ozugbo. Ọzọkwa, i kwesịrị nwere 7zip, Winrar ma ọ bụ ụfọdụ ihe ndị ọzọ archiving ngwa arụnyere wepụ a file. M na-eji Winrar.
Ọzọkwa, i kwesịrị ịma na usoro ụdị kọmputa gị ma ọ bụ laptọọpụ, dị ka usoro bụ obere dị iche iche maka 32 na 64 bit na usoro Iji chọpụta usoro ụdị, pịa mmalite menu. Tinye usoro ihe ọmụma. Na nsonaazụ ọchụchọ, pịa Ozi sistemụ imeghe ya.
Chọọ maka usoro ụdị mara usoro ụdị. Dị ka ị pụrụ ịhụ, m nwere a 64-bit PC. Systemdị sistemu gị bụ 32-bit.
Ọ bụrụ na ị na-ahụ ihe x86 ma ọ bụ 32-bit dabeere PC. M na-ewere na ihe ọ bụla dị njikere site na njedebe nke ya. Ka anyị budata faịlụ mscomctl.ocx na weebụsaịtị Microsoft, mgbe anyị wepụtachara ya, detuo faịlụ mscomctl.ocx, gaa na-anya ụgbọala C ma ọ bụ Ebe Windows arụnyere, a na-etinyekarị Windows na draịva C, mepee folda Windows m na-eji 64-bit PC ma achọrọ m folda a na-akpọ SysWOW64.
Ọ bụrụ na ị nwere 32-bit PC, ị ga-achọ maka folda System32. Madoga faịlụ ahụ depụtaghachiri na folda SysWOW64. Biko mado ha n'ime System32 folder.
Ọ bụrụ na ị na-eji kọmputa 32-bit. Pịa Gaa n'ihu. Mgbe a nzọụkwụ, ugbu a ị chọrọ na-emeghe iwu ozugbo ka aha a akụrụngwa.
Na Malite menu, pịnye CMD. Right pịa na-agba ọsọ iwu ozugbo dị ka nchịkwa. Pịnye CD / na pịa Tinye.
Pịnye cd c: windows syswow64 wee pịa Tinye. Biko pịnye cd c: windows system32 ma ọ bụrụ na ị na-eme nke a na PC 32-bit. Ugbu a tinye reg. a svr32 mscomctl.ocx wee kụrụ banye.
Mgbe emechara, ịkwesighi ịmalitegharịa sistemu gị. Ugbu a na-agbalị iji wụnye ma ọ bụ jiri software, njehie a ga-egbo. Olileanya ị jisiri ike idozi ahụhụ a na-akpasu iwe ma mee ka anyị mara ma ị ka na-enwe nsogbu.
Team Software geek ga na-agbalị inyere gị aka. Nwere ike iji ngalaba nkọwa. Biko gaa na SoftSuggester.Com maka iwu CMD na Njikọ Njikọ.
ike kwụsị powerpoint
Nye edemede a isi mkpịsị aka ma denye aha na Software Geek ma nyere anyị aka ịme isiokwu ndị ọzọ na-enye aka ma na-enye nkọwa.
Etu ị ga-esi ewepu DC Universe Online-Microsoft Community?
Nwere ike iwepụ ihe niile site na ịmalite Launchpad na C: userspublicSony Online EntertainmentInstalled Games Universe Online mgbe ahụ enwere akara ngosi nhọrọ na aka ekpe aka ekpe, na-esote ogwe mmelite, wee họrọ iwepụ: D
Kedu ihe kpatara iwepụ ngalaba DC Universal anaghị arụ ọrụ?
Ọ na-enye m ihe njehie mgbe m na-aga iwepụ ya site na tinye na-ewepụ mmemme. Ọ naghị arụ ọrụ site na DCUO panel ihe ma. Kedu ihe na-eme ugbu a? Akpa ọchị ịgwa m banyere ya.
Gịnị na-eme mgbe a na usoro ga-bụghị iwepụ?
Mgbe ụfọdụ mmemme agaghị ewepu mgbe usoro ya na-agba ọsọ na ndabere. Maka ịkwụsị usoro niile dị n'akụkụ ọ ka mma iji ọnọdụ Nchekwa. Iji reboot n'ime Nchekwa mode na-eme ndị na-esonụ: Mgbe usoro ibu ị pụrụ ịgbalị iwepụ usoro ihe omume ọzọ ma ọ bụ iji wepụ ya faịlụ na nchekwa.
Gịnị mere e ji m DC Universe game bụghị wụnye?
Na onye ọ bụla na-enwe a nke dị ka nke ọma, ị ga-gbanyụọ gị virus nyocha, firewall na anya gị kuki. I nwekwara ike ịrụkwa faịlụ ahụ. Echere m na ihe mere bụ na firewall m mere ka ọ ghara ịwụnye n'ụzọ ziri ezi. A na-emeso m okwu lol.